गर्भको शिशुको डायरी – मझेरी डट कम
आज मेरो जीवनको आरम्भ भयो । मेरो बाबा आमालाई मेरो अस्तित्व बारे अहिलेसम्म थाहा छैन, अहिले म मकैको दाना सरह सानो छु, तर सानै भए नि म नै हु । र म एउटी छोरी हुनेछु, मेरो कालो कपाल र निलो आँखा हुनेछ । म फूल मनपराउने छु, आफ्नी आमा झैँ म सुन्दर हुनेछु ।
कोही भन्छन् कि मेरो सास भए नि म वास्तविक व्यक्ति होइन, कि केवल मेरी आमाको अस्तित्व छ तर मेरो छैन । तर जसरी एउटा रोटीको टुक्रा रोटी नै कहालाइन्छ म नि मेरी आमाको एक
अंश हु, मेरो नि अस्तित्व छ, म नि वास्तविक व्यक्ति हु । मेरी आमा हुनुहुन्छ त्यसैले म नि छु ।
अब मेरो मुख केही केही खोलिन थालेको छ, म सोच्छु अब को एक साल जस्तो पछि म हास्न पनि थाल्ने छु र केही साल पछि बोल्न थाल्नेछु । मलाई थाहा छ मेरो मुखबाट निस्कने पहिलो
शब्द के हुनेछ: आमा ।
आज देखि मेरो मुटु आफै धड्कन थालेको छ । आज देखि उसो यो बिना कुनै बिश्राम यसरी नै सुस्तरी धड्कने छ ! र धेरै वर्ष पछि यो थाक्ने छ, र यो रोकिने छ अनि म मर्ने छु ।
दिन प्रतिदिन म बड्दै जादैछु, मेरो हात अनि खुट्टाले अब आकार लिन थालेको छ । तर मेरा यी हातले मेरी आमा को न्यानो अंगालोलाई अंगाल्न मैले धेरै महिना अँझै पर्खने पर्नेछ । अब मेरा हातमा साना साना औलाहरू बनिन थालेका छन् ।
आज मेरी डाक्टरले मेरी आमालाई भन्नु भो कि म उनीभित्र जिउदैव छु । कति खुसी छिन् होलिन् मेरी आमा यो कुरा सुनेर । आमा, के तपाई खुसी हुनुहुन्छ?
अब त मेरा आमा बाबाले मेरो लागि नाम पनि सोचिसके होलान् । तर तिनीहरूलाई के थाहा कि म सानी छोरी हु भनी ! मलाई सबैले मरियम भनी बोलावोस भन्ने मेरो इच्छा छ । अब त म धेरै
ठुली भइसके ।
मेरो केश बढ्न थालेको छ, यो चिल्लो अनि चम्किलो छ । कहिलेकाहीं मेरी आमाको केश कस्तो होला भनी म सोच्ने गर्छु ।
अब म अलि अलि देख्न पनि थालेको छु, अहिले मेरो वरी-परी अंधकार छ । जब मेरी आमाले मलाई यो संसारमा ल्याउनेछिन् त्यहाँ उज्यालो, अनि फूलै फूल हुनेछ । तर यी सबभन्दा नि ज्यादा इच्छा मलाई मेरी आमालाई हेर्ने छ । तपाई कस्ती देखिनुहुन्छ, आमा?
के मेरी आमाले मेरो हृदय को मन्द स्पन्दनलाई सुन्छिन् भनी म सोच्ने गर्छु? कोही नानीहरू यो संसारमा आउदा बिरामी भएर आउछन । तर मेरो मुटु बलियो र स्वस्थ छ । यो बडो ठिकसित “टुप-टुप,टुप-टुप” गर्दै धड्क–न्छ ।
आज मेरी आमाले मलाई मार्नुभयो !